Fa maninona ny iPhone no mandeha mahitsy amin'ny mailaka? Ity ny The Fix! - Iphone
ohatrinona no aloa amin'ny tapakila tsy fahazoan-dàlana
seranan-tsambo ipod tsy mandeha
inona no hatao rehefa milaza ny ipad anao fa mifandray amin'i iTunes
ny fomba hamerenako ny fivarotako fampiharana
Fa maninona ny iPhone no mandeha mahitsy amin'ny mailaka? Ity ny The Fix!
Miezaka miantso anao ny namanao, saingy tsy afa-manoatra izy ireo. Maneno ny iPhones rehefa miantso ianao azy ireo , ka maninona no tsy anao ny anao? Amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava aho maninona ny iPhone-nao no mandeha any am-mailaka rehefa misy miantso SY ny fomba fanamboarana ny olana tsara.
Fa maninona ny iPhone no mandeha mahitsy amin'ny mailaka rehefa misy miantso?
Mandeha am-mailaka ny iPhone-nao satria tsy manana serivisy ny iPhone, velomina ny Do Not Disturb, na misy fanavaozana ny Carriers Settings. Hanampy anao izahay hamantatra sy hamaha ny tena olana etsy ambany.
Ny antony 7 mahatonga ny iPhones mandeha mahitsy amin'ny mailaka
Misy antony telo lehibe mahatonga ny iPhones handeha amin'ny mailaka mivantana, ary saika ny rehetra efa mahalala ny voalohany. Vonona aho ny handefa ny antso ataonao fa mandeha am-mailaka ny mailakao noho ny antony # 2 na # 3.
rehefa mangidihidy ny felatananao ankavia
Tsy misy fomba fanompoana / fiaramanidina
Rehefa lavitra loatra ny iPhone-nao mba hifandray amin'ny tilikambo sela, na rehefa tapahina avy any ivelany amin'ny alàlan'ny Airplane Mode dia mandeha amin'ny mailaka ny antso rehetra satria tsy mifandray amin'ny tambajotra finday ny iPhone-nao.
Rehefa mihidy ny iPhone (maty ny efijery) dia aza mangina amin'ny antso rehetra alefa, fampandrenesana hafatra an-tsoratra ary fampandrenesana amin'ny iPhoneo ny iPhone. Tsy toy ny maody mangina, Do Aza manelingelina mandefa antso tonga hatrany amin'ny mailaka.
Ahoana no ahalalako raha tsy mandeha ny fikorontanana?
Jereo eo an-jorony ambony ankavanan'ny iPhone, eo ankavanan'ny sary masina. Raha mahita volana amam-bolana ianao, dia andrehitra ny Do Not Disturb.
Ahoana no hamonoako tsy hanelingelina?
Ny fomba haingana indrindra hamonoana ny Do Not Disturb dia hita ao amin'ny Control Center. Raha hanokatra Control Center dia ampiasao ny rantsan-tànanao hikisaka avy eo ambanin'ny fampisehoana iPhone. Tadiavo ny sary masina volana, ary kitiho amin'ny rantsan-tànanao izany mba hamonoana ny Do Not Disturb.
Azonao atao ihany koa ny mamono ny Aza manelingelina ao amin'ny fampiharana Settings amin'ny alàlan'ny Fikirana -> Aza manelingelina . Tsindrio ny switch eo ankavanan'ny Aza elingelenina hamonoana Aza manelingelina.
Ahoana no tsy namonoana ny fanelingelenana voalohany?
Sokafy ny Fikirana fampiharana ary paompy Aza elingelenina . dia Voalahatra velona? Raha izany dia hivadika ho azy tampoka ny iPhone tsy tokony hanelingelina anao rehefa matory ianao.
Aza manelingelina raha mitondra fiara
Fampisehoana vaovao nampidirina tamin'ny iOS 11 antsoina hoe Aza Manelingelina Mandritra ny Familiana dia mety hivadika ho azy rehefa hitan'ny iPhone rehefa mandeha fiara ianao.
Mba hamonoana Aza manelingelina eo am-pamiliana dia mila manampy aloha ianao Aza manelingelina raha mitondra fiara mankany amin'ny Center Control amin'ny alàlan'ny Fikirana -> Ivotoerana fanaraha-maso -> ampanjifaina ny fifehezana ary tap ny famantarana miampy maitso eo amin'ny ilany ankavanan'ny Aza Manelingelina Mandritra ny Familiana.
Manaraka, swipe ambony ambany ny efijery mba hanokatra Control Center ary paompy ny Aza manelingelina raha mitondra fiara sary masina
iphone 6 dia mieritreritra fa tafiditra ao an-doha ny headphone
Ny mpamaky sasany dia nitatitra vahaolana vaovao nipoitra tao amin'ny tsimbadika farany an'ny iOS: Change Change Announcement Calls to Always. Mandeha Fikirana -> Telefaona -> Filazana antso , tap foana , ary andramo.
Zahao ny fanavaozana ny lozisialy
Raha mandeha mahitsy amin'ny mailaka ny antso ataonao, dia mety mila manavao ireo toe-javatra fitaterana ao amin'ny iPhone ianao. Ny fikirana ho an'ny mpitatitra dia izay mamela ny iPhone hifandray amin'ny tamba-jotra tsy misy mpampita anao.
Raha toa ka lany andro ny fikirakiran'ny mpitatitra ny iPhone dia mety hanahirana ny mampifandray amin'ny tamba-jotra ny mpitatitra anao, izay mety hahatonga ny antso an-tariby hiditra mivantana any amin'ny mailakao.
Hanamarina a Fanavaozana ny fametrahana ny mpitatitra , sokafy ny Fikirana fampiharana ary paompy General -> Momba . Raha misy fanavaozana ny toeran'ny mpitatitra, hisy fampandrenesana hiseho amin'ny fampisehoana iPhone anao izay manao hoe “ Fanavaozana ny fametrahana ny mpitatitra “. Raha miseho amin'ny iPhone ity fampandrenesana ity dia tap vaovao farany .
Ajanony ny fanginana ireo mpiantso tsy fantatra
Mangina ireo mpiantso tsy fantatra handefa antso an-tariby avy amin'ny isa tsy fantatra mivantana amin'ny mailaka. Ny antso dia hiseho ao amin'ny Vao tsy ela vakizoro amin'ny telefaona na dia mandeha any am-mailaka aza izany.
Sokafy ny fikirana ary kitiho Phone . Vonoy ny switch eo akaikin'ny Fahanginana Tsy fantatra mpiantso hamonoana ity fametrahana ity.
Mifandraisa amin'ny mpitatitra anao
Misy vintana mety mila hifandraisanao amin'ny mpitondra anao sela momba ny olana iray amin'ny serivisy ho an'ny antso an-tariby na nalatsaka. Raha toa ka mitranga tsy tapaka izay tsy raisin'ireo dingana famahana olana ato amin'ity lahatsoratra ity dia mety mila mifandray amin'ny mpamatsy anao ianao sao misy olana fantatra na misy fanavaozana tilikambo izay tokony hatao ao aminy. tapitra.
Nomera fifandraisana amin'ny mpanohana tsy misy tariby
Tonga ve ny fotoana hanovana ireo mpitatitra tsy misy tariby?
Raha tofoka amin'ny olana tsy tapaka amin'ny mpitatitra tsy misy tariby ianao dia mety te-hieritreritra ny hifindra. Matetika ianao dia manangona vola be rehefa manao! Zahao ny fitaovana UpPhone ho ampitahao ny drafitry ny finday avy amin'ny mpitatitra tsy misy tariby rehetra any Etazonia.
ahoana no hanampiako fifandraisana avy amina sms amin'ny iphone-ko
Miverina amin'ny grid ianao
Maneno indray ny iPhone-nao ary tsy mandeha am-mailaka ny antso ataonao. Do Not Disturb dia singa iray mora ampiasaina rehefa matory ianao, nefa mety hiteraka aretin'andoha matotra raha tsy hainao ny mampiasa azy. Vonjeo ny sakaizanao sy ny fianakavianao aretin'andoha mitovy amin'izany amin'ny fizarana an'ity lahatsoratra ity amin'ny media sosialy hahafahan'izy ireo mianatra ihany koa ny antony mahatonga ny iPhone-nao handeha amin'ny mailaka mivantana!
Misaotra namaky, ary tsarovy ny mandoa azy,